Kismaayo News » Madaxweynayaasha soomaalidu goormay baadi-goobi doonaan firka halgamayaashii soomaaliyeed?
Madaxweynayaasha soomaalidu goormay baadi-goobi doonaan firka halgamayaashii soomaaliyeed?
Kn: Madaxweyne Ardogan ayaa magaalada Baariis ku qaabiley qaar ka mid ah dadkii ka tafiirmay Khulafadii Cutjmaaniyiinta ee muddada dheer muslimiinta u talin jirey, kuwaas oo ku nool dalka Faransiiska.
Dadkaas wixii ka haray waa laga musaafuriyey dalka Turkiga markii dowladaha Kirishtaanku ay dumiyeen dowladdii Cuthmaaniyiinta oo muddada dheer u taagnayd faafinta diinta islaamka iyo difaaca muslimiinta.
Dalkii Turkiga waxaa qabsaday maamulo la mabda’ ah dowladihii muslimiinta ka adkaaday, waxayna iyaga iyo dowladihii Kirishtaanka ahaa isu kaashadeen sidii dalka Turkiga iyo muslimiinta oo dhan looga dabargoyn lahaa diinta islaamka, dhaqankeeda, taariikhdeeda iyo wax walba oo xiriir la leh.
Dadkii ka haray dowladdii islaamka madaxdeeda gaar ahaan qoyska Aalu Cuthmaan dalka waa laga musaafuriyey si ummadda looga quusiyo dowlad islaam ah, loona illowsiiyo sooyaalkii quruxda iyo quwada lahaa ee muslimiintu dunida ku joogeen.
Madaxweyne Ardogan oo xoog badan galiyey in dadweynaha Turkiga lugu xiro usuushoodii iyo taariikhdoodii sharafta lahayd ayaa kula kulmay safaaradda Turkiga ee Baariis dad ka soo jeeda qoyskii Cuthmaniyiinta ee muslimiinta soo hoggaaminayey 800 sano. Taas oo qayb ka ah soo noolaynta taariikhdii muslimiinta iyo moralkoodii.
Uma baahnin in aynu ka faalloono muuqaalka dadkaan iyo dhaqanka ka muuqda; waayo caaqilku waa dareemayaa isbadalka ku dhici kara ilmo isaga iyo waalidkiisba la nicibyahay oo la doonayo in laga jaro asalkiisii.
Soomaalida hadda joogta halgamaa walba waxay ka xayuubiyeen magicii iyo tilmaantii soomaalinimo ee uu caanka ku ahaa, waxayna ku sunteena summadda qabiilkii uu ka dhashay, qabiilkii uu ka dhashayna waxay ugu magac-dareen meelaha ay dagaan, waxayna ku darsadeen waxyaabaha ay ku faanaan?.
Gabagabadii su’aashu waxay tahay goormay madaxweynayaasheenu baadi-goobi doonaan halgamayaashii soomaaliyeed, firkoodii iyo dadkii wax u soo qabtay dalkaan iyo dadkiisa?.
Halkaan ka akhri khabarka: http://www.turkey-post.net/p-236726/